रोचक भाइले दिदीको मोबाइल च’लाउदा दिदीको यस्तो तस्वीर देखेपछि….
आफ्नै भान्जी कर’णी गरेको अभियोगमा मामा पक्राउ परेका छन् । मामाघरमा बस्दै आएकी भान्जीलाई केही वर्ष अघिदेखि नै मामाले पटक पटक यस्तो हर्कत गर्दै आएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । उनीमाथि बिहीबार कर’णीमा मुद्धा दर्ता गरी जिल्ला अदालत बाट म्याद थपसहित आवश्यक अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीले बताएको छ । कक्षा ९ मा अध्ययनरत बालिका माथि उनकै मामाले यस्तो नारकिय हर्कत गर्ने गरेको घटना सबै सामु आएको हाे ।
कक्षा ९ मा अध्यनरत बालिकामाथि ६३ वर्षका मामाले उनी माथि पटक पटक यस्तो हर्कत गर्ने गरेको खुलासा भएपछि मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनले भान्जीको मोबाइलमा अ श्लि’ल तस्बिरसमेत खिचेको भेटिएको छ ।
बालिकाको भाइले आफ्नो दिदीको मोबाइल चलाउन खोज्दा नजानेपछि गाउँका एक छिमेकीलाई मोबाइल चलाउन सिकाइदिन आग्रह गर्दा मोबाइलमा अ श्लि’ल तस्बिर देखेपछि घटना बाहिरिएको हो ।
किन श्री’मानले श्रीम’तीको मोबाइल जाँ’च गर्छन् ?
भनिन्छ, श्रीमान्–श्रीमतीको बीचको स’म्बन्ध र प्रे’मलाई कुनै समझदार व्यक्तिले मात्र बुझ्न सक्छ । उनीहरुका बीचमा एउटा बेग्लै प्रकारको सम’झदारी कायम हुन्छ ।
ग’र्भमा रहेको ब’च्चा छो’रा वा हो छोरी ? ग’र्भवतीको शा’रीरिक स्थिति वा अन्य कुनै सं’केतबाट त्यसको छि’नोफानो गर्न सकिएला ?